Imifanekiso emitsha ehanjisiweyo yePixel 3a kunye nePixel 3a XL iyavela | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UGoogle ukulungele ukwazisa ii-smartphones zakhe eziphakathi kuluhlu oluphakathi, oluya kuba yi- IPixel 3a kunye nePixel 3a XL kwinyanga elandelayo. Ngokunxulumene, inkampani kutshanje yabelana nge-online teaser ethi into entsha iza kuza ngoMeyi 7.
Kucacile ukuba uGoogle ebethetha ukumiliselwa kwe-Pixel elindelwe ixesha elide phakathi kwee-smartphones. Ngoku, ngaphambi kokumiselwa ngokusemthethweni kwale duo, ukuhanjiswa okutsha kwezixhobo zombini kuvele kwi-Intanethi. Masibone!
Olu luyilo lweGoogle Pixel 3a kunye ne3a XL
Iinguqulelo ezintsha zePixel 3a kunye ne3a XL
Umfanekiso ongasentla, ogcina ezi zixhobo zimbini, ubonakalisa oko Izakuza nee-bezels ezinkulu ezijikeleze isikrini. Isikrini kwezi azibonisi naluphi na uhlobo lwenotshi. Ukongeza, kucacisiwe ukuba baya kuza ne-headphone ye-3.5mm, ebekwe phezulu kwifowuni.
Ngokwendlela yoyilo, Zombini ii-smartphones ziyafana. Kukwabonakala ngathi ziqulathe i-bezel engezantsi yesayizi efanayo (chin), egcina isithethi esinye. Kwelinye icala, nangona kubonakala ngathi bayalingana, ngokuchanekileyo iPixel 3a XL kulindeleke ukuba ibe nkulu kunePixel 3a.
Ngokusekwe kukuvuza kwangaphambili, iGoogle Pixel 3a iza nescreen se-5.6-intshi ene-2,220 x 1,080-pixel FHD + isisombululo sesikrini, ngelixa iGoogle Pixel 3a XL izakubonisa isikrini esine-intshi ezi-6 ngesisombululo se-pixels esingu-2,160 x 1,080 .
Ixabiso leGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL eCanada lihluziwe. Ngaba ukuthenga kwakho kuya kufaneleka?
Zombini ii-smartphones kulindeleke ukuba zize zixhotyiswe nge-4GB ye-RAM kwaye ine-64GB yokugcinwa kwangaphakathi, kunye nePixel 3a exhaswa yi Snapdragon 670 kunye ne-3 XL ye- Snapdragon 710.
Iingxelo zibonisa ukuba izixhobo ezikudidi oluphakathi nazo Baza kuza nekhamera yangemva kwe-pixel ezimbini ezi-12.2 MP ezifumaneka kwi Umgca wePrimiyamu 3. Amava eekhamera ngokubanzi iya kuba yile nto uGoogle aza kugxila kuyo kwezi modeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Imifanekiso emitsha enikezelweyo yePixel 3a kunye nePixel 3a XL iyavela